Tsy misintona na inona na inona
fanontaniana Tsy misintona na inona na inona
2 taona 4 volana lasa izay #488 by Penzoil3
Voasoratra avokoa, ny rindrambaiko rehetra rehetra. Free downloads - ny fotoana rehetra. Tsy afaka nandefasana zavatra nandritra ny volana maromaro aho!
2 taona 4 volana lasa izay #489 by Dariussssss
Mandra-pahoviana ianao no manana an'io olana io?
2 taona 4 volana lasa izay #490 by Dariussssss
Manana fanakianana rakitsoratra ve ianao ao amin'ny tranokalanao?
Jereo ny fifandraisanao amin'ny aterineto, mety ho mora miadana izany.
Afaka mandefa zavatra tsy misy olana aho, noho izany dia heveriko fa ny olana dia eo anilanao.
Andramo ny hanome anay vaovao bebe kokoa.
2 taona 4 volana lasa izay #491 by Penzoil3
Rehefa hoy aho nandritra ny volana maromaro. I attemptede mba hifandray RIKOOOO teo aloha, dia izay rehetra azoko Gee ny lohamilina dia tsara. Fotoana ny zava-drehetra eo anoloanao aho, dia afaka mahazo download, free download na ny mpikambana roa.
2 taona 4 volana lasa izay - 2 taona 4 volana lasa izay #492 by rikoooo
Ao amin'ny FAQ dia nohazavainay fa ny finday dia nomena avy amin'ny port 8080 fa tsy ny port 80. Noho izany, ny fomba tsotra indrindra hahafantarana raha ny tranokalan'ny 8080 nosakanan'ny firewall anao dia ny miezaka maka zavatra avy amin'ny Simviation.com, fa maninona? Satria ny fampiendrehana dia mampiasa ny seranan-tserasera ho an'ny fandefasana azy ireo, ka raha tsy miasa amin'ny simviation sy Rikoooo izy dia ny 100% azo antoka, ny baikon'ny firewall dia manakana ny port 8080. Tsy maintsy manokatra ny seranan-tsambo 8080 TCP / UDP ianao amin'ny fametrahana fitsipika ao amin'ny rindrin'ny afo.
Avy eo ny download tsirairay dia hiasa amin'ny tranokalantsika ary eny amin'ny tranonkala maro hafa.
Fanovana farany: 2 taona 4 volana lasa izay rikoooo.
2 taona 1 volana lasa izay #700 by Penzoil3
Raha misy olona hafa mitatitra an'io olana io, lazao izy ireo hamerina ny safidin-tseranana modem-paodim-pahefana. Ny olana nataoko dia nopotehina.
Fotoana mamorona pejy: 0.226 segondra